Maxaa kasoo baxay Kulan Saacado badan qaatay oo Maanta Guddiga Amniga Qaranka ku yeesheen Muqdisho?	« AYAAMO TV
Maxaa kasoo baxay Kulan Saacado badan qaatay oo Maanta Guddiga Amniga Qaranka ku yeesheen Muqdisho?
430 Views Date March 18th, 2014 time 4:05 pm
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir guddoominayay kulan gudigga amniga Qaranka isugu yimaadeen oo lagu qabtay xarunta Madaxtooyada ayaa ciidamada Dowlada ku bogaadiyay inay sii labo jibaaraan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Kulanka oo muddo saacado qaatay ayaa lagu gorfeeyeey guud ahaan xaalada ammaan ee dalka iyo dar dargelinta dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Waxaa kulanka kaddib Warbaahinta la hadlaya Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyo Wasiirka gaashaandhigga, iyadoo ugu horeyn Wasiirka difaaca Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan ayaa faah faahin ka bixyaay kulan iyo waxyaabihii looga hadlay kulankaasi.
“Shirka waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ah guubaabo loo jeediyay ciidanka Dowlada iyo kuwa AMISOM, taageerada shacabka ee ciidanka iyo gar gaar la gaarsiiyo goobihii laga xoreeyay Al-Shabaab, maadaama meelaha qaar ay ka jiraan biyo la’aan, waxaan hay’adaha caalamka ka codsaneynaa inay kaalmo gaarsiiyaan deegaannadaasi laga sifeeyay cadowga” ayuu yiri Wasiirka Difaaca.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo isna halkaasi hadal ka jeediyay ayaa si guud uga hadlay qorshaha dowladda Soomaaliya ay ku dooneyso xoreynta dalka.
“Sidaan waxaynu dagaal kula jirnaa kooxaha argagixisada, goobaha rayidka, masaajidda iyo dadka rayidka ayay beegsadaan, waxay lumin doonaan goobaha ay gacanta ku hayaan, iyagoo ka gal galanaya dagaalka lagu hayo ayay damacsanyihiin inay falal argagixiso ah geystaan, Umadda Soomaaliyeed waxaan uga tacsiyaynaynaa falalka ay kooxaha ku hayaan bulshada, ciidamada waxaan ku wargelinayaa in ay feejignaan dheeri ah muujiyaan, howlgallada ka dhanka ah Shabaab ma hakan doono” ayuu yiri Ra’iisul wasaaraha.
Ra’iisul wasaaraha waxaa uu soo hadal qaaday qorshayaal dalka lagu xasilinayo isagoo ugu baaqey dhalinyarada la marin habaabiyaay ee Al-Shabaab in shacabkooda ay wax laqeybsadaan.
“Waxaan ugu baaqayaa dhalinta ay qaldayaan Shabaabku inay ka waantoobaan dhibaatada ay shacabka ku hayaan, waxaana leeyahay ka faa’iideysta baaqa idinkaga imaanaya dhanka dowladda si aad u heshaan mustaqbal wanaagsan” ayuu hadalkiisa ku daray Dr Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed.